Beledweyne: Banaanbax lagu taageeri rabay Madaxda DF Somaliya oo la joojiyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Beledweyne: Banaanbax lagu taageeri rabay Madaxda DF Somaliya oo la joojiyay
Beledweyne: Banaanbax lagu taageeri rabay Madaxda DF Somaliya oo la joojiyay
Beledweyne (Halqaran.com) – Waxaa maanta Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ka socday qaban qaabada banaanbax la sheegay in lagu taageraayo Madaxda Dowladda Federaalka, hayeeshee kaas oo aan weli qabsoomin.
Taliska Booliska Gobolka Hiiraan ayaa Ciidamo fara badan oo Boolis ah geeyay Goobo loo qorsheeyay in uu banaanbaxa ka dhaco, halkaas oo ay tegi lahaayeen dad dhigi lahaa banaanbaxa lagu taageray dowladda.
Taliyaha Ciidaka Booliska Gobolka Hiiraan Cali Dhuux Cabdi Mahadalle ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin banaanbaxyo sharci darro ah oo lagu qabto magaalada Beledweyne, isla markaana banaanbax aan la ogeysiin laamaha amniga aan la qaban karin.
Dhinaca kale, Guddoomiye ku xigeenka Amniga gobolka Hiiraan oo goor dhaw Wariyeyaasha kula hadlay fogaarayaal xalay lagu balamiyay banaanbaxayaal taageersan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in Muxaafid iyo Mucaarad aan ogalaansho ka heysan Hirshabeelle dhigi karin banaanbax.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegaya in guud ahaan waddooyinka Magaalada Beledweyne ay xiran yihiin, kadib markii la dhoobay Ciidamo farabadan.